Kufaatii Kooriyaa Kaabaa: kooriyaan Kibbaa 'hubannaa guutuun' maree itti fufuuf jirti - BBC News Afaan Oromoo
Kufaatii Kooriyaa Kaabaa: kooriyaan Kibbaa 'hubannaa guutuun' maree itti fufuuf jirti
18 Amajjii 2018
Goodayyaa suuraa Waggoota lamaan darban keessatti yeroo jalqabaaf hoggantoonni olaanoo wayita wal argan
Kooriyaan Kaabaa sagantaa meeshaa niwukileera ishee itti fufuuf yeroo bitaa jirti jedhee adduunyaan wayita akeekkachiisaa jiru kanatti, Kooriyaan Kibbaa sadarkaa olaanaatti Piyoongiyaang waliin hubannaa guutuu ta'een haasa'uu akka itti fuftu dubbatte.
Carraa argame kana ''haalaan itti hojjechuu qabna'' jechuun Kooriyaa Kaabaatti Ministirri Hajaa Alaa Kaang Kyuung-whaa BBC'tti himaniiru.
Dhiheenyatti Kooriyaan lamaan Olimpikii gannaa kan ji'a dhufu Kooriyaa Kibbatti geggeefamu irratti alaabaa ''Kooriyaa tokkoomte'' jalatti akka hiriiran waliigaluun isaanii ni yaadatama.
Mareen kunis kan dubbatamaa jiru wayita Ameerikaa fi michoonni ishee Kooriyaa Kaabaa irratti dhiibbaa gochuuf kakataa jiranitti.
Ministirri Hajaa Alaa Ameerikaa Reex Tileersoon qoqqobbiin godhame ''dhugaatti dhukkubsuu jalqabaa jira'' jechuun Roobii darbe kan dubbatan wayita ta'u, dhiibbaan kun sagantaa niwukileeraa fi misaa'elaa ilaalchisee Kooriyaan Kaabaa gara mareetti akka dhuftu ishee dirqisiisa jechuun dubbataniiru.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampis, Ameerikaan ofii isheefi biyyoota michooota ishee irraa ittisuuf kan dirqamtu yoo taate Kooriyaa Kaabaa ni barbadeessiti jechuun waggaa darbe keessa dubbatanii turan.
''Kun yeroo dhiibbaa irraa xiqqeesanii fi Kooriyaa Kaabaa itti badhaasan miti,'' jechuun Ministirri Haajaa Alaa Jaappaan Taaroo Koonoo dubbataniiru jechuun dhaabbanni oduu Riyooteers gabaaseera.
Ejjennoon Se'ool marii irratti qabdu maali?
''Akkan yaadutti nu caalaa kan Kooriyaa Kaabaa hubatu hin jiru, yeroo dheeraaf Kooriyaa Kaabaa waliin haasaa irra waan turreef, maree walirraa hin cinne dhaabaa itti fufaa waan turreef," jechuun Kaang dubbataniiru.
''Dhiheenyatti mari'annee hin beeknu, kanaafu kun carraa gaariidha," jedhu.
Goodayyaa suuraa Alaabaa waliinii Kooriyaan lamaan qabachuuf irratti waliigalan
Yeroo dheeraa fudhachuun - naannoo Kooriyaa keessaa niwukileera deebisanii balleessuu ilaalchisee, Kooriyaa Kibbaa fi michoonni ishee ''ilaalcha baay'ee walfakkaataa'' qabna jechuunis Aadde Kaang dabalanii dubbataniiru.
Akkuma qoqqobbiin godhame miidhaa agarsiisu jalqabe, gargaarsi namoomaas dabalataan gara Kooriyaa Kaabaatti akka ergamu Si'ool barbaaddi, jechuun Ministiritiin dubbataniiru
Sirni awwaalchaa Artiist Laggasaa Abdii raawwatame
Waliiti bu'insa Allaamaxaatti uumameen namootni shan du'uu himame
"Miira wal makaatu natti dhagaahame" - atileet Fayyisaa Leellisaa
''Ji'a lamaaf dheebuu keessa jirra,'' jiraattota Harar
Sa'uudiin gaazexeessaa Jamaal Khashojii ajjeefamuu amante